Ogaden News Agency (ONA) – Ururka OYSU oo munaasabad aad u qiimo badan ku qabtay dalka Yemen oo ay ku xusayeen Ciida.
Ururka OYSU oo munaasabad aad u qiimo badan ku qabtay dalka Yemen oo ay ku xusayeen Ciida.
Ururka Dhalinyarada OYSU ee dalka Yemen ayaa shir ay ku xusayeen munaasabadii Ciidal Adxaa oo aad qiimo badan ku qabtay caasimadda dalka Yemen ee Sanca. Munaasabada ayaa sidoo kale lagu taageerayay go’aankii ay jabhadda ka qaadatay wadahadalkii dhamaan ku fashilmay magaalada Nairobi.
Shirka oo ey ka soo qeyb galeen dhamaan bulshada Ogadenia qeybaheeda kala duwan ayaa waxaa laga soo jeediyay qudbado kala duwan oo aad u qiimi badan. Qudbadahaas oo lagu furay quraanka kariimka ah iyo wayci diini ah oo aad u qiimi badan ayaa waxaa soo jeediyay sheekh Cabdulrahman ciro oo dadkii ka soo qaybgalay ku waaniyay cabsida Ilaahay inay xoojiyaan oy midnimada ilaaliyaan. Intaa ka dib ayaa waxaa ka hadalay oo isagana qudbad aad u qiimo badanayd oo ku saabsanayd taariikhda dalka Ogadenya iyo halganka shacabka S.Ogadenya uu ku doonayo gabanimadiisa ka soo jeediyay gudomiyaha jaliyada ee dalka Yemen.
Waxaa kaloo ka hadalay shirka xoghaya Ururka Dhalinyarada OYSU oo isaguna ka soo jediyay madasha qudbad aad u qiimi badnayd oo ku saabsanayd ardayda iyo dhalinyarada Ogadenia waxa looga bahanyahay meel kastoo ey jogaan iyo waajibaadka saaran iyo qaybta ay ku leeyihiin halganka inay la garab taagnaadaan hiil iyo hooba.
Waxaay madaxdii ka hadashay shirka ku booriyeen dadkii shirka ka soo qeyb galay inay halgankooda daacad u noqdaan, waxayna kula dardaarmeen inay taageerada halgankooda sii laba jibaaraan.
Waxaan meesha ka maqneyn xidhidhiyaha jaaliyada dalka Yemen halgame Xusen gabood oo isagan ka soo jeediyay madasha qudbad dadkii meesha jogay aad u badashay. Waxaa ka mid ahaa arimaha uu ka hadalay guusha laga gaadhay wada hadaladii ONLF & Itobiya taasoo uu halgamuhu si aad u faahfaahsan uga hadlay isagoo si aad ahna ugu hambalyeeyay waftigii uga qeyb galay wada hadalada Jahabda Wadaniga Xorayta isagoo ku bogaadiyay sida dhiirinimada leh ey u muujiyeen hadafka JWXO. Shirka oo ey ka soo qaybgaleen martsharaf aad u farabadan oy ka mid ahaayeen haya’adaha qaxootiga u jooga dalka Yemen ayaa guul ku dhamaaday.